Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Jaraya Taageeradii uu Siin Jiray Ciidanka Soomaaliya.
Maraykanka oo Jaraya Taageeradii uu Siin Jiray Ciidanka Soomaaliya.
Posted by ONA Admin	/ December 16, 2017
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay jarayso tageerada ay siin jirtay Ciidanka Soomaaliya, sababta ayaa ah musuqmaasuq baahsan oo wax laga qaban waayay oo ku dhex jira Dowaldda Soomaaliya, sidaas waxaa Warbaahinta u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibadda ee Maraykanka.
Taageerada la jarayo waxaa kamid ah Saadka sida Shidaalka, cunada iyo waliba hubka. Wasaarada Arimaha Dibada ee Maraykanka ayaa sheegtay in ay hakad galinayaan taageerada, ilaa la xaqiijiyo in taageerada Maraykanka loo isticmaalo si ku haboon.
Dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaa ku taagan tageerada ay siiyaan dalalka shisheeye, waxaana tani noqon kartaa dhabar jab weyn oo soo gaadha Soomaaliya iyo ol-olaha ay ugu jirto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Sida laga soo xiganayo qoraalo ay gacanta ku dhigtay wakaalada wararka ee Reuters, Dowladda federaalku ma awoodo in ay siiso ciidankeeda cuno iyo mushahar ama ay qalabayso, iyada oo hesha Malaayin dollar oo taageero ah oo Maraykanku bixiyo.